Hjem > Uncategorized @so > Isbeddellada la kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) ee Isbitaalka Ullevål
Isbeddellada la kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) ee Isbitaalka Ullevål
labelEmner: Endring i konsultasjoner ved UllevålHiv og covid-19somali
Dhakhaatiirtu waxay eegi doonaan baadhitaanka / shaybaarada (prøvene), cusboonaysiin doonaan warqadaha daawada (resepter) waxayna qori doonaan qoraal (notat) usbuuc gudihiis ka dib wakhtiga balanta. Haddii uu dhakhtarku fursad u helo, qofka ay khusayso ayaa soo wici doona maalinta saacadda markii hore la dejiyay, inta badan waxaa la dajinayaa wakhtiga lagu heshiiyay.
Haddi dhakhtarku ku qasban yahay oo aanu haleelayn, waxa uu qoraal loo diri doona bukaanka, qoraalkuna waxa kale oo laga heli karaa helsenorge.no.
Waa muhiim in dhiiga laga qaado.
Dhakhtarka sare Bente Bergersen oo jooga rugta bukaan-socodka ayaa ku nuuxnuuxsaday inay muhiim tahay in qof walba laga qaado baadhitaanka dhiigga (blodprøven ) sidii ballanta loogu qabtay. Kaliya kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) wuxuu ku dhici doonaa taleefoonka ama qaab dhijitaal ah oo lasa oo dhexmaayo aalada helsenorge.no.
Isbeddelkan wuxuu marka hore dhaqan-gal noqon doona kulanka dhakhtarka (konsultasjoner) dhici lahaa muddada u dhaxaysa 17ka Diisambar ilaa 7da Janaayo. Warqado ayaa loo diraa dhammaan bukaannada uu saameeyay isbeddelku.